January 26, 2015 – democracy for burma
On January 26, 2015 January 26, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Marching walking Mandalay to Rangoon
Students boycotted the National Education
Myingyan စှနျးလှနျး monastery
The students are blocked at Taungthar Junction Point.
Police forces are approaching to Sun Lunn Kyaung now.
40 Military trucks had already dropped down rolls of iron wire at Taungthar Junction Point.
All of the telecommunication and internet are cut off now.
On January 26, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Dozens of Chinese logging operators have petitioned local authorities in Yunnan to intervene over the arrests of more than 150 logging workers in Myanmar’s Kachin State and the seizure of equipment worth hundreds of million yuan,
Burma Military of Defense used the drone aircraft for spying the Chinese loggers and arrested more than 100 Chinese loggers.
အမှုစစ်ဆေးမှုတွင် တရားလိုပြသက်သေ ဒေါ်ယုယုဝင်းထွက်ဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ “အံ့ခေါင်မင်း နဲ့ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်း အင်တာဗျူးဖတ်ပြီးတော့ သမ္မတနှင့်သူ့အစိုးရအဖွဲ့ကို အကြည်ညိုတော့ ပျက်မသွား ဘူးမဟုတ်လားလို့မေးတာ၊ အကြည်ညိုပျက်သွားတယ်တဲ့။ ငါကဆက်မေးတယ်။ အကြည်ညိုပျက်တယ် ဆိုရင် ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်း ပြောတာတွေကို ခင်ဗျားလက်ခံလို့၊ ယုံလို့ အကြည်ညိုပျက်တာလားဆိုတော့ အဲဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေတယ်။ အကြည်ညိုပျက်တယ်ဆိုရင် တို့ကမေးတာက ရေးတာတွေကိုယုံ လို့လား၊ လက်ခံလို့လား။ ရေးတာတွေကို မယုံကြည်ရင် အကြည်ညိုပျက်စရာမှ မရှိတာ”ဟု မြန်မာသံ တော်ဆင့်ရှေ့နေဦးဇော်လင်းက ပြောသည်။ Continue reading “#မြန်မာသံတော်ဆင့်၏ အင်တာဗျူးဖတ်ပြီးနောက် ပြန်ကြားရေးဒုညွှန်မှူး မူပိုင်ခွင့်ဌာနက #သမ္မတကို #အကြည်ညိုပျက်သွားကြောင်း သက်သေထွက်ဆို” →